Waterproof RGB LED Car Deco | Glocal DIY Online Car Acces... | CarsDB
Glocal DIY Online Car Accessories
Waterproof RGB LED Car Deco
View Product Seller Profile
ကားအလှဆင် အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းနိုင်တဲ့ ရေစိုခံ LED (RGB 5050) ကြိုးလေးများဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ IR remote control ဖြင့် လိုသလိုအရောင်နှင့် Pattern များကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ အရှည်မှာ ၅ မီတာ (၁၆ ပေခွဲ) 12V သုံးရပြီး အလွယ်တကူ ဖြတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ 626 total,
အလားတူ ကားပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
Howo A7 ရှေ့...
GK 3-Honda F...
Glocal DIY Online Car Accessories မှတင်ထားသော အခြားပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှူများ
Aluminium AC k...
Plasma Ball Ca...
Rays Racing Lu...
Magnetic Fuel ...
မင်္ဂလာပါ။ www.carsdb.com မှတဆင့် မိတ်ဆွေ၏ အထက်အကြောင်းအရာပါ ကားပစ္စည်းကို ရှာတွေ့ပါတယ်.။ ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ဖော်ပြပါပစ္စည်းရဲ့ အခြားအချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိလိုပါတယ်.။ ဒါကြောင့် ယခု Email ကို အချက်အလက်များ ပြန်လည်ပို့ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်.။ လေးစားစွာဖြင့်